Ancelotti Oo Sharaxay Farqiga U Dhaxeeya Barca-Real & Sababta Ay Ugu Cad-cad Yihiin Qaadista CL %
Tababarahii hore ee kooxaha Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan iyo kuwa kale, ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti ayaa wuxuu aaminsan yahay in farqiga udhaxeeya Los Blancos iyo Barcelona uu yahay mid aan aad ubadneen uuna yar yahay.
Macalinkaan reer Italy ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay sababta ay uga cad-cad yihiin labadaan kooxood qaadista tartanka Champions League ee fasal ciyaareedkan, isagoona kusoo kooban in sababtu ay tahay inay haystaan Cristiano Ronaldo iyo Lione Messi.
Ancelotti ayaa wuxuu kaloo ka hadlay kulamada Juventus vs Real Madrid iyo Barcelona vs AS Roma, ee ka tirsan wareega Sideed dhamaadka Champions League, wuxuuna cod dheer ku sheegay in Madrid iyo Barca, ay guusha udhow yihiin.
“Waa wax iska cad in kulamada Champions League ay go’aamiyaan wax yar oo faah-faahin ah, marka laga reebo qaabka ay kulamada kuugu filan yihiin iyo waliba go’aamada Garsoorayaasha,” ayuu warbaahinta usheegay Carlo Ancelotti.
“Madrid iyo Barcelona waa kuwa ay ugu cad-cad dahay [inay Champions League qaadi doonan] maxaa yeelay khibradooda koobka iyo waliba inay haystaan Messi iyo Ronaldo,” ayuu hadalkiisa kusii daray hogaamiyihii hore ee Real Madrid.
“Waa mid iska cad in [Juventus iyo Roma] aysan ahayn kuwa ugu cad-cad [inay badin karaan] maxaa yeelay waxay ka hor-jeedaan labo koox ee ugu awooda badan Yurub, laakiin waxay wali haystaan fursado,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Carlo.
BarcelonaCarlo Ancelotti Real MadridCL